ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပြော
This handout picture taken and released by the Vatican press office (Osservatore Romano) on December 1, 2017 shows Pope Francis shaking hands with Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina during their meeting in Dhaka. Pope Francis arrived in Bangladesh from Myanmar on November 30 for the second stage ofavisit that has been overshadowed by the plight of hundreds of thousands of Rohingya refugees. / AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / Handout / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ခ် ဟာစီနာကို ပြောပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ဗာတီကန်ရှိ အပိုစတိုလစ် နန်းတော်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဟာစီနာတို့ တွေ့ဆုံစဉ် အခုလို ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ဗာတီကန် အတွင်းရေးမှူး ကာဒီနယ် ပေထရို ပါရိုလင်က ပြောပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့ကို လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လက်မခံတဲ့ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဆိုတဲ့ အသုံးကို မသုံးနှုန်းခဲ့လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒုက်ခသညျတှကေို လကျခံထားလို့ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကို ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ပွော
ရခိုငျပွညျနယျက ထှကျပွေးလာတဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို လကျခံထားတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ဖရနျစဈက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဝနျကွီးခြုပျ ရှိတျချ ဟာစီနာကို ပွောပါတယျ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၂ ရကျနေ့ ဗာတီကနျရှိ အပိုစတိုလဈ နနျးတျောမှာ ပုပျရဟနျးမငျးကွီးနဲ့ ဝနျကွီးခြုပျ ဟာစီနာတို့ တှဆေုံ့စဉျ အခုလို ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး ဗာတီကနျ အတှငျးရေးမှူး ကာဒီနယျ ပထေရို ပါရိုလငျက ပွောပါတယျ။
ပုပျရဟနျးမငျးကွီးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈလကြျောက မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံတို့ကို လာရောကျခဲ့ပါတယျ။ ခရီးစဉျအတှငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံက လကျမခံတဲ့ ‘ရိုဟငျဂြာ’ ဆိုတဲ့ အသုံးကို မသုံးနှုနျးခဲ့လို့ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
Previous article မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန် လိုလား
Next articleဒူဘိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဟိုတယ် ဖွင့်လှစ်